Kenya oo duqeyn ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo duqeyn ku dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab
Kenya ayaa sheegtay in ay dishay 11 dagaallame oo ka tirsan Kooxda Al-Shabaab, kadib duqeyn cirka ah oo ka dhacday gobolka Jubbada Hoose.
KISMAAYO, Soomaaliya - Ciidamada Difaaca Kenya (KDF), ee qeybta ka ah Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), ayaa sheegay in ay dileen 11 xubnood oo ka tirsan Kooxda Al-Shabaab tiro kalena ku dhaawaceen jasiiradda Kudhaa oo ku taal gobolka Jubbada Hoose.
David Goldman, Agaasimaha La-dagaallanka Argagixisada, ayaa sheegay in ay duqeyn ku dileen 11 dagaallame ee ka tirsan Al-Shabaab, kadib weerar dhanka cirka ah oo ay ka filiyeen kaymaha ka baxsan magaalada Kudhaa, sidoo kale wuxuu sheegay in ay laba gaari ku burburiyeen weerarka.
Goldman ayaa xusuay in duqeyntan ay daba socotey hawlgal dhulka ah oo ciidamada Kenya ay qaadeen kadib markii Al-Shabaab ay weerareen ciidamado ka tirsan kuwa Jubaland oo ku safrayey agagaarka Kudhaa oo dhcda gobolka Jubbada Hoose, subaxnimadii hore ee Arbacada, markaas oo Al-Shabaab ay sheegtey inay ku dileen 8 askari.
Al-Shabaab ayaan weli ka hadlin warka ka soo baxay militariga Kenya ee sheegaya in 11 dagaalyahan lagu diley duqeyn dhanka cirka ah, taas oo ku soo beegmeysa iyadoo ay jiraan warar sheegaya iska hor imaadyo dhimasho iyo dhaawacba leh oo u dhexeeyay ciidamada Kenya iyo kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee ku sugan gobolka ku dhow xadka Kenya.
Ciidamada Kenya ayaa soo galay Soomaaliya sanadkii 2011, si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab waxayna ku biireen AMISOM, Howlgalka Midowga Afrika sanadkii 2012.